Cenozoic Era: Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato | Saadaasha Shabakadda
Cenozoic Era: Waxkasta oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Maanta waxaan safar ugu baxaynaa wixii la soo dhaafay. Laakiin maaha waagii hore dhawr sano ama dhawr qarni ka hor. Waxaan u socdaalaynaa 66 milyan oo sano oo aan dib ugu laabanno xilligan la joogo. Waana taas the Cenozoic waa xilli seddexaad u ahaa xilliyadii waaweynaa ee taariikhda Dunida soo maray. Waxay ahayd waqtigii ugu caansanaa ee ay qaaraduhu ku helayeen qaabeynta ay maanta haystaan. Waan xasuusanahay taas aragtida duulista qaaradda iyo saxanka tectonics-ka ayaa sharxaya in qaaradduhu guurto.
Ma rabtaa inaad ogaato dhammaan astaamaha iyo dhacdooyinka, cilmiga iyo cilmiga bayoolajiga, ee ka dhacay Cenozoic? Qoraalkan ayaan dhammaantiin idiin sheegaynaa 🙂
1 Waa maxay Cenozoic?
2 Astaamaha xilligii Cenozoic
3 Waa maxay xilliyadan xilligan la marayo?
3.1 Muddada jaamacadeed
3.2 Muddada Quarternary
4 Cimizo Cimizoic
Waa maxay Cenozoic?
Juquraafiga, dhirta iyo duunyada adduunka ayaan xasilloonayn muddo ka dib. Sanadihii la soo dhaafay waxay ku soo ifbaxayaan isgoysyada noocyada iyo isbeddelada xaaladaha deegaanka. Dhagaxyada, dhanka kale, waxay la socdaan qaaradaha, iyagoo wax ku abuuraya kuna burburinaya taarikada tectonic.
Ereyga Cenozoic wuxuu ka yimid erayga Kainozoic. Waxaa adeegsaday khabiir ku takhasusay cilmiga dhulka iyo cilmiga dhulka John Phillips si loogu magac daro qaybaha hoose ee Phanerozoic Aeon.
Xilligii 'Cenozoic' wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan, maaddaama ay u taagan tahay daqiiqaddii ay diinosaarradii la waayey. Tani waxay calaamad u ahayd bilowgii kacaankii naasleyda. Intaas waxaa sii dheer, qaaradaha waxay heleen qaabeynta maanta la dayactiray oo ubaxyada iyo duudduubku is beddeleen. Xaaladaha cusub ee deegaanka ee dhulkeennu soo bandhigay, ayaa ku qasbay inay beddelaan panorama oo dhan oo illaa hadda la yaqaan.
Xayawaanka ku jira Cenozoic
Intii lagu gudajiray Cenozoic, Badweynta Atlantik waa ay ballaarisay oo waxay sameysay baaxadda buuraha Atlantic. Wadamada qaarkood sida Hindiya waxaa ku dhacay argagax weyn oo tectonic ah taas oo keentay sameynta Himalayas. Dhinaca kale, Taarikada Afrika waxay u dhaqaaqday jihada Yurub si ay u samayso Alps Switzerland. Ugu dambeyntii, Waqooyiga Ameerika Buuraha Rocky waxaa sameeyay isla geedi socod isku mid ah.
Dhagaxyada kuwaas oo joogay xilligan waxaa lagu horumariyey qaaradaha iyo bannaanka hoose, iyagoo helay heer adag oo adag. Tan waxaa u sabab ah cadaadiska sare ee keena aaska qoto dheer, baaritaanka kiimikada, iyo heerkulka sare. Dhanka kale, waa dhagxaanta la mariyo ee xilligan ku badnaa. In kabadan kala bar dhamaan saliida aduunka waxaa laga soo saaraa meelaha dhagaxa ah ee dhagxaanta leh.
Astaamaha xilligii Cenozoic
Tan iyo xilligan uu soo galay baabi'inta dinosaurs, waxaa jiray isbadalo badan oo ka dhacay heerka meerayaasha. Midka koowaad wuxuu ahaa isbeddelka iyo ballaarinta naasleyda. Maaddaama aysan lahayn dinosaurs ahaan tartan, waxay awoodeen inay horumariyaan oo kala duwanaadaan. Isweydaarsiga hidaha ayaa gacan ka gaystay kordhinta faafitaanka iyo la qabsiga naasleyda jawi kala duwan.
Guud ahaan, waxaa jiray fiditaanka xayawaanka oo dhan Dhulka oo dhan. Taarikada Tectonic waxay ku socotaa dhaqdhaqaaq joogto ah waana xilligan uu ballaadhay Badweynta Atlaantik. Dhacdooyinka ugu mudnaanta badnaa ee maanta muhiimadda lahaa waxay ahaayeen:
Safafka buuraha waaweyn ee adduunka oo dhan ayaa la sameeyay.
Hominids-kii ugu horreeyay ayaa soo muuqday.
Koofiyadaha cirifka ayaa la sameeyay.
Noocyada aadanaha ayaa muujiyey.
Waa maxay xilliyadan xilligan la marayo?
Sida lagu sharaxay waqtiga cilmiga dhulka Xilli kasta wuxuu ka kooban yahay dhowr xilli. Cenozoic-ka waxaa loo qaybiyaa laba xilli oo loo yaqaan Tertiary iyo Quaternary. Kuwani waxay markooda u kala baxaan xilliyo kala duwan.
Mideynta qaaradaha iyo sameynta safaf dhaadheer oo hadda jira
Waa xilligii ugu horreeyay ee qaababka nolosha dushiisa iyo baddubaba ay la mid yihiin kuwa hadda jira. Tan iyo markii ay meesha ka baxeen dinosaurs, xayawaanno iyo shimbiro ayaa xukumi jiray meeraha. Tani waa sababta oo ah ma aysan haysan nooc tartan ah. Waqtigan la joogo geedaha dhirta, xayawaannada jilicsan, marsupials, cayayaanka iyo xitaa nibiriga ayaa jiray.
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, muddadan ayaa markeeda loo qaybiyaa xilliyo kala duwan oo kala ah:
Paleocene. Waxaa lagu gartaa qaboojinta meerayaasha iyadoo ay sabab u tahay sameynta koofiyadaha cirifka. Pangea-ka qaaradaha ayaa ugu dambeyntii kala qaybsamay oo qaaradaha waxay qaateen qaabkii maanta. Noocyo fara badan oo shimbiro ah ayaa soo baxay iyada oo ay weheliso horumarka angiosperms. Sidoo kale, Greenland way ka fogaatay Waqooyiga Ameerika.
Eocene. Waqtigaan safafka buuraha waaweyn ee aan kor ku soo xusnay way soo baxeen. Naasleydu wax badan ayey horumar sameeyeen oo waxay noqdeen xayawaanka ugu muhiimsan. Fardihii ugu horreeyay ayaa soo muuqday oo astaamo ayaa dhashay. Qaar ka mid ah naasleyda sida nibiriga oo loo waafajiyay deegaanka badda.
Oligocene. Waqtigaani waa xilli taarikada tectonic-ka ay sii waday isku dhaca si ay u samayso Badda Dhexe. Safafka buuraha sida Himalayas iyo Alps ayaa la sameeyay.
Miocene. Dhammaan safafka buuraha waa la dhammaystiray waxaana la sameeyay barafka Antarctic. Tani waxay sababtay in jawiga guud ee Dunida uu noqdo mid qabow. Dhul daaqsimeedyo badan ayaa ka soo bilawday adduunka oo duunyadu isu beddeleen.
Pliocene. Waqtigaan, xayawaanku waxay gaareen heerkoodii ugu sarreeyay oo way faafeen. Cimilada ayaa qabow oo qalalan oo hominids-kii ugu horreeyay ayaa soo muuqday. Noocyada sida Australopithecines iyo Homo habilis iyo erectus faaftay, awoowayaasha sapiens faaftay.
Tani waa xilligii ugu casrisanaa ee aan ognahay. Waxaa loo qaybiyaa laba xilli:
Pleistocene. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa xilligii barafka tan iyo markii ay fidday rubuc ka mid ah dusha dhulka oo dhan. Meelo uusan baraf weligeed ka jirin horay loo daboolay. Dhamaadka xilligan naasley badan ayaa dabar go'ay.
Holocene. Waa xilligii barafku baaba'ay isaga oo keenaya sagxadaha dhulka iyo ballaadhinta shelf-ga qaaradda. Cimilada ayaa ka diirran oo leh flora iyo fauna badan. Dadku way horumariyaan waxayna bilaabaan ugaarsiga iyo beerashada.
Cenozoic-ka waxaa loo tixgeliyey in muddo ah meeraha uu qaboojiyey. Waqti dheer ayey qaadatay. Ka dib markii Australiya ay gebi ahaanba ka go'day Antarctica xilligii Oligocene, cimilada ayaa si aad ah u qabowday muuqaalka kore ee Wareegtada Antarctic kaas oo soo saaray qaboojin aad u weyn oo ka mid ah Badweynta Antarctic.
Intii lagu gudajiray Miocene waxaa jiray kuleyl sababtoo ah sii deynta kaarboon dioxide. Ka dib qaboojinta cimilada, da 'barafkii ugu horreeyay ayaa bilaabmay.
Macluumaadkan waxaad ku baran doontaa wax badan oo ku saabsan taariikhda dhulkeenna 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Cenozoic Era: Waxkasta oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Kaliya hoosta ka xariiq inaan jeclahay boggaaga. Waxaan awooday inaan barto waxyaabo badan oo aanan aqoon ...